3 1 Kuchengetedza Mucheka - Kitchenware.com
kugashira » 3 1 Kubika Cutting Peeler
3 1 Kubika Cutting Peeler
Apo zhizha raswedera kune avocado ndeimwe yevakakosha zvikuru uye vanoshandiswa miriwo!
Zvichida kuita gacamole shomanana kwechirwere chekushandisa, kana kuti kugadzira tuna nemayonnaise kana imwe, unofanira kugara uchifamba nenzira iyi inoshungurudza iyo inofanira kuderedzwa hafu (kusvikira panguva iyo inofamba) uye kubvisa ichi chakanaka ropa guru rinotapira, zvose pasina chizoro!
Ne peeler iyi 3 1 inongova mufaro chete!
Nhanho 1, iwe unosunungura avocado muhafu yekubatsira kwaronhanho 2 iwe uchabvisa nyore nyore kernel vanotenda kune tsime rakagadzirirwa mashizha ayo achauya uye anobata mutsara kuti aunatse. Nhanho 3 (kusarudza!) iwe unopinza muchechi chiremba thanks to his "tennis racket" :-)
Inonyaradza uye isiri-kuputika kubata
Inogona kucheneswa muzvinoshambadza.
Kuyera: 19,5 x 6 cm